Ronald Koeman oo u sheegay Macallinka Kooxda Dynamo Kyiv muddada uu garoommada ka maqnaan doono Gerard Pique – Gool FM
(Barcelona) 25 Nof 2020. Tababare Ronald Koeman ayaa u sheegay Macallinka Kooxda Dynamo Kyiv muddada uu garoommada ka maqnaan doono Gerard Pique oo dhaawacan.
Labada Tababare ee Ronald Koeman iyo Mircea Lucescu ayaa wada sheekeystay intii lagu guda jiray kulankii xalay Champions League ee ay wada ciyaareen kooxahooda Barcelona iyo Dynamo Kyiv, waxaana ay ka wada hadleen dhaawaca Gerard Pique.
Macallinka reer Holland ayaa u sheegay Tababaraha ka soo horjeeday in daafaciisa dhexe ee Gerard Pique uu garoomada ka maqnaan doono afar illaa shan bilood.
Tani waxa ay imaanaysaa kaddib markii Barcelona ay ka gaabsatay inay bixiso waqti lagu qiyaasayo inta ay qaadan karto soo kabsashada Gerard Pique kaddib markii ay soo saartay bayaankeeda ay ku xaqiijinayso dhaawaca daafaceeda.
“Waxaan daawaday kulankiinii Atletico Madrid si fiican ayaad u ciyaarteen qeybta hore, ciyaartiinna aad ayay u fiicnayd.” ayuu Tababare Lucescu u sheegay Koeman sida laga soo xigtay Movistar.
“Aad ayay u fiican yihiin difaacoodana waa mid xooggan,” ayuu Koeman ugu jawaab celiyey macallin Lucescu.
“Waxaad hesheen fursado aad ku dhalin karteen,” ayuu yiri Lucescu, balse Koeman ayaa markale ku jawaab celiyey: “Haa, haa, laakiin nasiib darro ayaa na heshay iyo dhaawacyo”
“Ansu Fati ayaa maqnaan doona qiyaastii saddex bilood, Pique waxaa laga yaabaa inuu maqnaado afar ama shan bilood, Sergi Roberto wuxuu maqnaan doonaa labo bilood, laakiin waad ogtahay isla dhibaatadii ayaa ku haysata, waana waalli.” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Macallinka Barcelona ee Koeman.